VILLAGE TOURISTIQUE : Hita natsingevan’ny ranomasina ny razan’ilay tovolahy
24 ora mahery taorian’ny nilentehany vao naloan’ny ranomasina ilay tovolahy 15 taona dobo ,ny alarobia teo. Ireo nitady azy no nahita azy efa nitsingevana ka nampiakatra ny razana an-tanety. 8 septembre 2017
Efa nanomboka simba moa ny razana ka nokarakaraina avy hatrany satria mbola halefa mody any aminy. Raha tsiahivina dia tanora mpilalao baolina tonga eto Mahajanga izy ireo handray anjara amin’ny tournoi Danji.
Nilomano niaraka tamin’ny namany teny amin’ny village touristique, lasa teny amin’ny lalina ka dobo. Tsy tonga saina ihany koa ny namany fa dobo izy raha tsy efa elaela ary na niantso vonjy aza io namany io dia tsy taitra ny olona.
Izy no fahavalo tamin’ireo natelin’ny rano tamin’ity taona ity. Ny TVHFB sy ny tompontany, ny mpamonjy voina ary ny zandary ao amin’ny brigade port moa no nanao ny fikarohana. Toy ny mahazatra dia tsy hita tabilao kosa ny APMF izay tokony ho tompon’andraikitra amin’ny tranga tahaka itony.
Toa manilika andraikitra amin’ny TVHFB mpitantana ny torapasi-dranomasina izy ireo. Hadinony fa izy ireo no tompon’andraiki-panjakana misahana ny ranomasina sy ny renirano.
Nanao antso avo amin’ny prefen’i Mahajanga moa Abdallah Rosalie talen’ny TVHFB manoloana izao tsy fandraisana andraikitra izao na dia manana vedety afaka nanampy amin’ny famonjena aina sy fikarohana ny razana aza izy ireo.
Nanambara sahady ihany koa i Abdallah Rosalie fa misy ny fepetra tokony horaisina amin’ny fiarovana ny ain’ireo mpitsangatsangana eny amin’ny village touristique ary efa misy hanome vedety amin’izany.